Ogaden News Agency (ONA) – Dagaaladii u Dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada oo Wali socda & Shacab Badan oo La’laayay.
Dagaaladii u Dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada oo Wali socda & Shacab Badan oo La’laayay.
Posted by Wariye Qaran	/ June 11, 2018
Wararka naga soo gaadhaya gudaha Ogaadeniya gaar ahaan magaalada jig jiga ee xarunta gobolka Faafan ayaa waxay sheegayaan in dagaalo u dhaxeeya soomaalida iyo Oromada ay ka socdaan tuulooyinka iyo magaalooyinka kala ah Culuswayne, Feedho Caden iyo duleedka Jinacsani.
Dagaalkan ayaa waxaa dabada ka riixaya kooxda dhiiga shacabka ku naaxday ee TPLF waxayna uga gol lee dahay inay xukunkeeda kusii dheeraysato dhanka kale na doonaysa inay colaad ka dhex abuurto soomaalida iyo Oromada.
Hadaba dadkan shacabka ah maleeshiyaadka Oromadu laayeen ayaa tiradooda waxaa naloo sheegay inay yihiin 12 qof halka dhaawacuna intaas kasii badan yahay waxaana helay qaar kamida magacyadooda waxaana nasoo gaadhay Yuusuf Cabdulahi Ahmed, Mohamed Omar Ciise, Axmed yuusuf macalin, Hussen cali ibro iyo Xamdi Nuur Macalin.
Waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkaas shacabka ah inuu ilaahay naxariisti jano ka waraabiyo kuwa dhaawaca ah na u booga dhayo dib ayaan idin kala socod siin doonaa wixii kasoo kordha.